San Htun's Diary: အချိန်ရမှ နားဆင်ပါ - ၂
အချိန်ရမှ နားဆင်ပါ - ၂
ဒီသီချင်းက ဟော့ဖြစ်နေတော့ ကြားဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ အမေရိကန်အဆိုတော်မလေး Taylor Swift ရဲ့I knew you were trouble ။ ၂ မိနစ်လောက်မှ နားထောင် အစပိုင်းက စကားပြောနေတား) ။
I belong with you. You belong with me, Sweetheart. ဆိုတယ့် အပိုဒ်လေးကို မှတ်မိလို့ယူကျူမှာ လိုက်ရှာတာ သီချင်းနာမည်က Ho Hey ။ မှန်းတာ တော်တော် နီးစပ်တယ်း) ။
ဂရမ်မီဆုရ Gotye ရဲ့ Somebody that I used to Know သီချင်းလေးက နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်။
အမေရိကန်အိုင်ဒေါရဲ့ ဒိုင်ဖြစ်သလို ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကလည်း ထူးခြားတယ့် ရပ်ပါအဆိုတော် Nicki Minaj ။ မမိုးငွေ့ က အတောက်ပဆုံးကြယ် (သို့ ) နီကီမီနာ့ဂ်ျ ဆိုပြီး သူ့ အကြောင်း ပိုစ့်ရေးဖူးပါတယ်။
Alicia Keys ရဲ့Girl on Fire
အိပ်ကပ်ထဲက ဒေါ်လာနှစ်ဆယ် ဟစ်ဟော့သီချင်းလေးက နားထောင်ကောင်းတယ်။
ဆယ်တန်းပြီးလို့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စောင့်နေချိန်မှာ လှည်းတန်းက ဦးမြကြိုင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်တော့ မနက်ဆို အဲဒီသီချင်း ဖွင့်ထားတတ်တယ်။
အမေစု နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု လက်ခံစဉ် မြန်မာ့စောင်းကို ကမ္ဘာသိအောင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တယ့် စောင်းပညာရှင် ဦးနေဝါလက်သံကို နားထောင်ရပြီး စောင်းလက်သံက အတော်သာယာတာပဲ။ မြန်မာတူရိယာတွေမှာ စောင်းက အခက်ဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။
ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်တယ့်လခ့်ကို တွေ့ လို့မကြီးက နေဝါနဲ့ခင်ကြည်ဖြူဒီလောက်နာမည်ကြီးတာ နင် မသိဘူးလား။ တီဗွီမှာ သူတို့ သီချင်းတွေကြီးပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ငယ်သေးလို့တီဗွီထက် ဆော့ဖို့ မက်နေလို့နေမှာပေါ့။
စင်္ကာပူမှာ အဆိုတော် မာမာအေး ဂီတပွဲရှိတယ်လို့သတင်းပေးတယ့် မချစ်ကြည်အေးရဲ့မြန်မာ့ဂန္ထဝင်ဂီတမိခင်ကြီး အန်တီမာမာအေးနှင့် ဂီတပဒေသာပွဲ ပို့ စ်ကို ဖတ်ပြီး ပြောနေသးတယ်။ မကြီးရေ စန်းထွန်းတော့ အသက်ကြီးလာလို့ လား မသိဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက ပျင်းစရာကောင်းတယ်ထင်တယ့် ကသစ်ပန်း၊ နှင်းပျောက်တယ့်နွေ သီချင်းတွေကို နားထောင်ရတာ သီချင်းအဓိပ္ပာယ်ကလည်းကောင်း၊ အသံနေအသံထားနဲ့ဆိုတတ်လိုက်တာ။ မကြီးက သူလည်း ဟိုင်းကြီးက အခါကြီးရက်ကြီး ဘုရားပွဲတွေမှာ ဖွင့်တတ်တယ့် တူနယ်..တူနယ်.. (အစိန္တေယျ သီချင်းကို ဆိုလိုသည်) သီချင်းကို နားထောင်နေတယ်။ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းနေတာ နေမှာတယ့်။
ကိုယ် အသက်ပဲ ကြီးလာလို့ လား၊ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းနေတာလား ...ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း မသိတော့ပါ။
မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၃။
May be both...:DD
ကိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက
ခက်သည်... ခက်သည်.. ဟိုတယ်က ကိုးနက်ရှင်က ရွှေပြည်တော်က နတ်အတိုင်းပင် နှေးကွေးလေးလံ ထိုင်းမှိုင်းသည့်ကြားထဲ VPN ပါ တစ်ဆင့်ခံပြီး ဘလော့ဂ်ဂင်းလေသော်.. YouTube ဆိုသောအရာမှာ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်... စက်ဝိုင်းလေး ပေကလပ် ပေကလပ်နှင့် ၁၀ မိနစ်လောက် လည်နေလေသတည်း..... သို့သော် စောင်းသံကိုတော့ နာရီဝက်လောက် Stream buffer လုပ်တာစောင့်ပြီး နားထောင်သွား၏... :P
သီချင်းသံတွေ ဂီတသံတွေ စုံသွားတာဘဲ
တစ်နေရာတည်းကနေ စုံအောင် နားထောင်လိုက်ရတယ်
ဟင့်အင်း.. ခေါင်းစဉ်ပြောင်းမှ ရမယ် ညီမရေ..
“ ကွန်နက်ရှင်ရမှ နားဆင်ပါ ” လို့.. :)
မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းတွေ နားထောင်ချင်လာတာကတော့ နေရာဒေသ အပြောင်းအလဲနဲ့ အသက်အရွယ် ရင့်ကျက်လာတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါညီမရေ..
အောက်ဆုံးက မြန်မာ့ရိုးရာ စောင်းသံရယ် ၊ စောင်းသံနဲ့တွဲဆိုသွားတဲ့ ရတနာပုံသီချင်းရယ် မြတ်နိုးမဝအောင် နားထောင်သွားပါတယ်အမရေ .... ရတနာပုံသီချင်းကို မြန်မာပြည်ဦးသိန်းတန်ဗားရှင်းနဲ့ပဲ နားထောင်ဖူးတာ... :)
သီချင်းကြီး နားထောင်တိုင်း အသက်ကြီးတယ်တော့ ဟုတ်ပါဘူးဗျာ .... ကသစ်ပန်းတို့ ၊နှင်းပျောက်တဲ့နွေတို့ ၊ စိမ်းလဲ့ညိုတို့ ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တာပဲ ... အသက်ကဖြင့် ငယ်ငယ်လေးရှိသေး ... :D